गृहमन्त्रीज्यू ! बोक्सी आरोपमा कुटिएकी राधाभन्दा अभियुक्त मान्यज्यूको ज्यान प्यारो ! – YesKathmandu.com
काठमाडौं । टीकापुर विभत्सपूर्ण हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन राजपा नेताहरु गृहमन्त्रीलाई दवाव दिन शनिवार सिंहदरवार पुगे । कानुनलाई चुनौति दिँदै जेलभित्रै भोक हड्तालमा बसेका सांसद चौधरीको स्वास्थ्यमा समस्या आयो । समस्या आएलगतै उनलाई सेती अन्चल अस्पतालमा लगियो । चौधरीको स्वास्थ्यप्रति गृहमन्त्री र राजपा नेताहरु निकै चिन्तित बने र तत्काल काठमाडौं ल्याउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । शनिवार नै उनलाई काठमाडौंको वीर अस्पतालमा भर्ना गरियो ।
सेती अन्चल अस्पतालमै अन्धविश्वासको जघन्य अपराधमा परेकी राधा चौधरी जीवनमरणको दोसाँधमा छन् । बोक्सीको आरोपमा तथाकथित भोले बावा (रामबहादुर चौधरी) ले लगातार ६ घण्टा कुटपिट गरेपछि उनको अबस्था अत्यन्त नाजुक बन्यो । कुटपिटबाट टाउको, घाँटी, नाक, पेट र संवेदनशिल अंगमा चोट लागेको छ । तर उनको उपचारका लागि गृहमन्त्री थापाले काठमाडौं ल्याउन मातहतका निकायलाई हालसम्म निर्देशन जारी गरेका छैनन् ।
घरको गोठमा मल सोरिरहेकी राधालाई गाउँकै ६, ७ जना युवाले जवरजस्ती समातेर कथित भोले बाबा भएको ठाउँमा लगेका थिए । झण्डै सयौको संख्यामा गाउँलेहरु पनि त्यहाँ जम्मा भए । भोले बावाका कथित अपराधीले उनलाई निरन्तर ६ घण्टा हात र लातले प्रहार गरे । बोक्सी झार्ने भन्दै उनी माथी लगातार बर्बर अत्याचार भयो । अत्याचारको कसैले विरोध गरेनन्, तस्विर र भिडियो खिचेर जनप्रतिनिधिसमेत रमिते बनेको घटनाले देशको शिर झुकेको छ ।
‘यो सानो अपराध होइन । कल्पनै गर्न नसकिने अपराध हो । अत्यन्त दर्दनाक र कहालीलाग्दो त्यो घटनाले नेपाली समाज विचलित भएको छ । देश नै लज्जित भएको छ’ एमाले नेत्रृ तथा सांसद शान्ता चौधरीले आफ्नो फेसबुक पेजमा यसरी आक्रोस पोखेकी छिन् । उनले पिडित राधाको उपचारका लागि सरकारसँग आग्रह गरेकी छिन् । तर गृहमन्त्रीले मन्त्रालयमै गएर दवाव दिने राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको बोली सुने । तर चौधरी चेलीको आवाज सुनेनन् ।
अमानवीय कार्य गर्ने भोले बावा नाम गरेका रामबहादुर चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनीमाथी धेरै मुद्दाहरु लगाउन सक्ने आधार छन् । नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार उनलाई १० बर्ष जेल सजाय पनि हुन सक्छ । तर मुद्दालाई फितलो बनाउन जनप्रतिनिधिदेखि सरकारसम्म लागेको छ ।
सैन्य ताकतमा विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रको सूचि सार्वजनिक, अमेरिका पहिलो, चीन दोस्रो र भारत चौथो
झम्के साँझमा लैनचौर दरबारमा हाजिर, राजदुतलाई दिनभरको रिर्पोट सुनाए नेताहरुले
पशुपतिको वनकालीमा ५ करोडको लागतमा एक सय जोडीको सामुहिक विवाह
पुनर्संरचना प्रतिवेदन नबुझाउने एलडिओलाई परिवर्तन गर्ने चतावनी
देउवालाई दन्काउन ओलीलाई सहज
लेखा समितिको बैठक बहिष्कार गरी बनभोजमा पुगेका आपूर्तिमन्त्रीले यसरी लगाए ठुम्का
सिम्रिक एयरको हेलिकोप्टरमा आगलागी
पार्टीले राष्ट्रपतिमा दावा गर्नुपर्ने एमाले सांसदहरुको धारणा
प्रचण्डले ‘एकल काँटे’ भनेपछि प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्र सम्झाए
बोक्सीको आरोपमा कुटपिट युबतिको उपचारखर्च सरकारले व्यहोर्ने
परिणामुखीभन्दा फन्डा खोज्दै वर्तमान सरकारका चार मन्त्री
आफैँ किसान, आफैँ श्रमिक र आफैं साहु
खुमबहादुरलाई चुनौति दिन भाईले दिए बागी उम्मेद्धारी
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि एमाले नै पहिलो पार्टी बन्छ – ज्ञवाली
लालपूर्जा नहुँदा भूकम्पपीडितले पाएनन् अनुदान रकम
पहिले विदेशी बन्दुक बोकेर नेपाली मारे, अहिले भारत पुगेर प्रचण्डले कलंकको टीका लगाए